Shiinaha Syncmos Mcu Soo -saareyaasha iyo Warshadda Furitaanka, Xigasho Alaab -qeybiyeyaasha | Sichi
Syncmos Mcu Unlock - Warshadda, Alaab -qeybiyeyaasha, Soo -saarayaasha Shiinaha
Shaqaalahayaga iyada oo loo marayo tababar xirfadeed. Aqoon xirfadeed oo xirfad leh, dareen adag oo adeeg, si loo fuliyo dalabaadka adeegyada ee macaamiisha Syncmos Mcu Unlock,Ic Adeegyada Injineernimada Dib -u -noqoshada, Golaha PCB Jlcpcb, Adeegyada Golaha PCB ee Aniga ii dhow,PCB Clone. Waxaan soo dhawaynaynaa dukaameeystayaasha cusub iyo kuwii hore si ay noola soo xiriiraan taleefan ama noogu soo diraan su'aalaha boostada loogu talagalay ururada mustaqbalka ee la saadaalin karo iyo gaarista guulaha labada dhinac. Badeecadu waxay siin doontaa adduunka oo dhan, sida Yurub, Ameerika, Australia, Miami, Marseille, Namibia, Bangkok. kalsoonida iyo taageerada macmiilka! Mustaqbalka, waxaan sii wadi doonnaa adeegga ugu xirfadda iyo tayada sarreeya si aan u bixinno qiimaha ugu tartamaya, Si wadajir ah ula macaamiisheenna oo aan u gaarno guul-wada-guuleysiga! Ku soo dhowow weydiinta iyo la -tashiga!
Xulashada PGA Championship 2021 DFS: Xogta khabiirkayagu waxay muujineysaa sababta Jordan Spieth uu u tartami doono
Haddii uu toddobaadkan furi karo ciyaarta gaaban, hubaal wuu tartami karaa. ... Wuxuu caan ku ahaa isbuucii hore laakiin wuxuu ku guuldareystay inuu jabiyo 40 -ka ugu sareeya — hada wuxuu helaa ... Noren wuxuu usbuucii la soo dhaafay niyad jab ku qabtay Dallas usbuucii hore, laakiin wali si fiican ayuu u ciyaaray.
Ciyaaryahanka ugu Wanaagsan ee laga Jarin Karo Liis kasta oo NFL ah Xilliga Xilliga Dambe ee 2021
In kasta oo daboolkiisu uu yahay $ 11.9 milyan sannadka 2021, sii deyntiisa ayaa weli furi doonta $ 7.9 ... Dallas ayaa badbaadin karta $ 7.2 milyan iyada oo u qoondeyneysa Smith goynta 1-da Juun ka dib, ... Minnesota bishii hore, laakiin 27-jirka way ku adkaan kartaa inay jabiso liiska ugu dambeeya.
Dib -u -bilaabashada Ganacsiga IIROC - CUR
... warshadaha isgaarsiinta, ayuu yiri Brian Walker, maamule ka tirsan The CAP Group ee Dallas, ... magaalooyinka waaweyn oo u oggolow macaamiisha meel fog inay furaan oo ay kiraystaan ​​iyagoo adeegsanaya app. ... (Bloomberg) - Dillaac ka dhacay buundo dul marta Wabiga Mississippi ayaa ...
Texas GOP ayaa sheegtay inaysan taageeri doonin musharraxa golaha guurtida ee gobolka ee loo xiray DUI iyadoo carruur ay ku jirto gaarigeeda
Saraakiishu waxay ka heleen “tuubooyin dillaacsan” gaadhigii Tijerina, ayuu yidhi Zamora. ... aniga ayaa iga soo horjeeday bilowgiiba, ”ayay u sheegtay The Dallas Morning News Jimcihii. ... Marka la duubayo, waxaa la arkayaa booliska oo isku dayaya inay furaan gaariga sida Tijerina ...
Saynisyahannadu waxay ka shaqeeyaan furitaanka sirta nooc cusub oo COVID-19 ah oo ku faafaya Koonfur Afrika
Madaxa la -taliyaha caafimaadka ee Madaxweyne Biden Dr. Anthony Fauci ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay kala duwanaanshaha coronavirus ee ka soo ifbaxaya Koonfur Afrika. Cusub ee ...
Sida loo helo lambarka guriga ee nabdoon ee Wacitaanka Waajibaadka: Dagaal Qabow
Dillaac isku -darka ... Ugu dambayntii, waraaqdii ugu dambaysay ee aad u baahan tahay waa Maqaalka Wararka Dallas, oo ku dheggan gidaarka qolka mugdiga ah.
Syncmos Mcu wuxuu ka furaa Fiidyowyada laxiriira Youtube
Shaqaalaha warshaddu waxay leeyihiin ruux wanaagsan oo kooxeed, sidaa darteed waxaan si dhakhso leh u helnay alaab tayo sare leh, marka lagu daro, qiimaha sidoo kale waa ku habboon yahay, kani waa soo -saareyaal Shiine ah oo aad u wanaagsan oo lagu kalsoonaan karo.
Amiirad 2020.05.15 19:48:39
Sida Loo Jabsado Sawirka Mcu
Kaarka Micro SD Card PCB Layout
Altium Nuqul PCB Layout
Naqshadaynta PCB -ga Online
Injineerka Dib -u -Celinta Elektaroonigga ah